> Resource > Lugood > Sida loo wadaag Music on Lugood
Ma doonaysaa inaad la wadaagto ururinta music ee Lugood qoysaska iyo saaxiibada aad ka mid ah? Halkan waa xaq ah Lugood music qaybsiga qalab taasoo u fududaynaysa in ay wadaagaan music on Lugood. Taasi Wondershare TunesGo (dadka isticmaala Windows). Qalabkani waxa uu u awood badan in ay kuu ogolaanayaa inaad la wadaagto aad Lugood music dadka kale 'iPod, iPhone iyo iPad aan ka saareen music jir iyaga on. Intaa waxaa dheer, waxay ku siinaysaa fursad ay ku wadaagaan music ka mid Lugood si kale aad.
Download iyo rakibi uu qalab ay isku dayaan wadaago music itune.
Fiiro gaar ah: Wondershare TunesGo si buuxda u taageersan iPhone badan, iPad iyo iPod. Fadlan calaamadee dhammaan taageeray iPhone / iPods / iPads iyo macruufka .
Sidee si ay u wadaagaan music on Lugood
First of dhan, ogolaanaysaa 'ka eegi kartaa suuqa kala xiriir ka dib markii socda qalab this on your computer.
Tallaabada 1. Isku aad iPhone / iPod / iPad in kombiyuutarka via cable USB ah
Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan iPhone / iPad / iPod in aad jeceshahay in aad samayn music qaybsiga Lugood xisaabinta ah. Qalabkani waxa uu si deg deg ah lagu ogaan doonaa qalab aad, oo tus in uu furmo suuqa ugu weyn.
Tallaabada 2. Share Lugood music
Markaas, guji "playlist" galeeysid ka tagay. Si aad u wadaagaan music on Lugood in aad iPhone / iPod / iPad, waa in aad guji saddexagalka rogay "Add" hoos. Dooro "Add Lugood playlist" ka mid ah liiska hoos-hoos. Tani waxay kor u soo Bixiyaa wax daaqad yar oo dhan playlists Lugood waxa ku jira. By default, playlists ayaa lagu eegaa. Uncheck aad playlists rabin marka aad rabto in qaar ka mid ah oo kaliya. Ka dib markii in, guji "OK". Inta lagu guda jiro habka music qaybsiga, hubi in aad iPhone / iPod / iPad xiran yahay.
Hadda, aad la wadaagtay music on Lugood in aad iPod / iPhone / iPad. Waxa aanu ka saarto heeso jir qalabka, waxba kama? Haddii aad rabto inaad la wadaagto music dib ugu Lugood kale. Waxaad qaadan kartaa habka hoos.
Download barnaamijkan on computer kale. Connect aad iPod / iPhone / iPad in computer this. In uu furmo suuqa hoose, guji "playlist" si aad u hesho suuqa kala playlist ah. Ka dooro playlists la wadaago, oo guji "Dhoofinta in". In liiska jiido-hoos, waxaad leedahay laba fursadood: "Dhoofinta in My Computer" iyo "Dhoofinta in Lugood Library". Dooro mid ka mid ah si ay u wadaagaan music si gal kombiyuutarka ama maktabadda Lugood.
Taasi tutorial fudud oo ku saabsan wadaaga music on Lugood. Iyadoo qalab, waad kala qaybsan kartaan music on kasta oo Lugood si iPhone / iPod / iPad ah meel kasta iyo waqti kasta. Waa si ammaan ah iyo virus-free, si aad marna u baahan tahay inaad ka welwelina khasaaro music.
Isku day TunesGo in aynu Lugood share music.
Ka iPod nidaameed Music inay Lugood
Bedelka Videos ka iPhone in Lugood
Bedelka Lugood Library in Computer New
Top 3 Free Lugood Lyrics Widgets u Mac
Sidee si ay u gudbiyaan Playlists ka Lugood in iPod